Oceanhorn 2 inoratidza kubata kwayo kwekutanga; inoshandisa Unreal 4 injini | IPhone nhau
Oceanhorn 2 inoratidza kubata kwayo kwekutanga; inoshandisa Unreal 4 injini
Kana isu tiri kubhurawuza iyo App Store uye isu tichiwana chikamu chemitambo, rimwe remazita anogara achinyatso kuoneka iOceanhorn, mutambo wakaita seZelda uriko pane zvoga zvoga. Oceanhorn yakarova App Store muna 2013 uye zvave kutozivikanwa kuti ichasvika munguva pfupi Oceanhorn 2, zita rekuti rakatosimbiswa kushandisa Unreal 4 giraidhi injini uye kubva kupi gracias KuTouchArcade isu takatokwanisa kuona ayo ekutanga screenshots.
Muridzi weiyo injini yemifananidzo yakashandisa yekutanga vhezheni yeOceanhorn haana kuvapa mukana wakakwana wekuwedzera mashandiro padanho repamusoro, saka vagadziri vemutambo mukuru uyu vakasarudza kuchinja kubva kuginjini yeinjini kuenda Zvisiri zvechokwadi 4, izvo zvinozovabvumidzawo kugadzikana kukuru kana zvasvika pakutora kune mamwe mapuratifomu, akadai sePC kana consoles.
Chinhu chekutanga chinobuda kunze kana tichitarisa pamascreenshots ndechekuti, panoburitswa zita, tinenge takatarisana nemutambo nevamwe zvinoshamisa mifananidzo Padanho remitambo yakawanda pane iyo PS3 uye Xbox 360 consoles, maviri ekunyaradza asiri echizvarwa chazvino asi ayo, ari desktop, akatopa mifananidzo yakanaka kwazvo. Uye kana mutambo uyu watotibata nekuona chete yapfuura gallery, ichaukwezva zvakanyanya kana uchienzanisa zvakapambwa zvekare neiyo yekutanga vhezheni yeOceanhorn.
Oceanhorn 2 ichasvika iine, vanoti, a protagonist nyowani, uye ndiregerere nekusahadzika pandinoenzanisa zvipfeko uye kunyangwe iwo magadzirirwo ebvudzi evatambi vezvakatorwa zvevashanduri vese. Izvo zvandisisina kukahadzika zvakanyanya ndezvekuti ichauya nenyaya nyowani nyowani ine zvakavanzika uye zvisingatarisirike kumonyoroka, ruzha rukuru uye zvakajairika RPG zvinobata senge zvinyorwa, mapuzzle, kurwisana, mabosi uye zvimwe.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya muOceanhorn 2 ndeye Chombo chinopfura mashiripiti projectiles izvo zvinotibvumidza isu kugadzirisa mapuzzle, kukwezva vavengi uye kukanda zvakanangwa zvitsinga. Ini handizive nezvako, asi mukana wekugadzirisa mapuzzle unondiita kuti ndifunge kuti chombo ichi chichatibvumidza kuita tumwe twemiteyo, kunyangwe ndichikanganisa.
Pasina mubvunzo, kunyangwe mhando idzi dzemitambo dzichigona kuridzwa zvakakwana pa iPhone kana iPad, zvakanakisa kugona kutamba pahwindo hombe ine MFi iri kure, uye ichi chinhu chatingaite nechekutanga vhezheni yeOceanhorn paApple TV. 4, saka tinogona kuzviita nekukurumidza Knights dzeakarasika nzvimbo, iyo ichanzi Oceanhorn 2. Uri kutarisira kutarisira kunotevera kubudiswa kweCornfox & Bros?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Oceanhorn 2 inoratidza kubata kwayo kwekutanga; inoshandisa Unreal 4 injini
6 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 31)